Nagumo Housing Co. , Ltd. ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက် [Genvers] အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအချိန်ပိုင်းအလုပ်ကိုင်စာချုပ်
Nanun Housing Co. , Ltd. တွင်အလုပ်ခွင်နှင့်ပတ်သတ်သောအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက်။ အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းများအချိန်ပိုင်းအလုပ်အကိုင်စာချုပ်
Nagumo Housing Co. , Ltd. အလုပ်များ
[ပညာရေးနောက်ခံ / အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ] လှပသောစိတ်ရင်းမလိုအပ်ပါ။သင်လိုအပ်သမျှလှုံ့ဆော်မှုပဲ! !! [အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုး] ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားအိမ်များအတွက်အမှာစာများကိုလက်ခံသည်။ သို့သော်ငြမ်းအပြင်ပန်းချီ၊ “ အတွင်းပိုင်း”၊ “ နံရံများ” နှင့်“ သတ္တုပြား” စသည့်အလုပ်အမျိုးမျိုးကိုလုပ်ကိုင်နေကြသည်။သင်ဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာစူပါမင်းကြီးတစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာဘောင်တစ်ခုတည်းနဲ့မပတ်သက်ဘဲနည်းပညာအမျိုးမျိုးကိုဆည်းပူးနိုင်တယ်။
Nagumo Housing Co. , Ltd. အလုပ်အကိုင်အကျဉ်းချုပ်
ငြမ်းအလုပ်၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ ရေစိုခံအလုပ်၊ အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၇၀၀၀ ယန်း
[Matsudo စတိုး] ☆ new ☆
3-7-20 Koganekiyoshigaoka, Matsudo City, Chiba စီရင်စု
3-8-18 Koyadai၊ ​​Funabashi City, Chiba စီရင်စု
1245-1 Fujigaya, Kashiwa City, Chiba စီရင်စု
Chiba စီရင်စု၊ Gagoko City၊ Funabashi City, Kashiwa City နှင့် Matsudo City, Saitama Prefecture (Misato City, Yoshikawa City, etc), Ibaraki Prefecture (Moriya City, Ushiku City, etc) ၏ဌာနခွဲများအပြင် အချို့ဒေသများရှိ (Katsushika Ward၊ Edogawa Ward စသည်)
JR Joban လိုင်းပေါ်ရှိ Kita-Kogane ဘူတာမှ ၁၀ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရမည်
* အင်တာဗျူးတည်နေရာ (Matsudo စတိုး) သတင်းအချက်အလက်
Nagumo Housing Co. , Ltd."ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။
■ Footwork ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအလုပ်လုပ်နိုင်သောသူများ
■ကုမ္ပဏီ၏ကြီးထွားမှုနှင့် ၄ င်းတို့၏တိုးတက်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သူများ
ပန်းချီ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ အတွင်းပိုင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ခေါင်မိုး၊ စာရွက်သတ္တုစသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။
ငြမ်းတပ်ဆင်ခြင်းအပြင်“ နံရံ၊ နံရံ၊ သတ္တုပြား၊ အတွင်းပိုင်း”၊ “ ပန်းချီ”၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းဂိုဏ်း ၀ န်ထမ်းများ (က) ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်ထဲတွင်ရှာဖွေနေကြသည်။
* အလုပ်တည်နေရာမှာ Kashiwa ဌာနခွဲနှင့် Funabashi ဌာနခွဲဖြစ်သည်
※ Beginners ကိုကြိုဆိုပါတယ်။
အသက်၊ ကျား / မနှင့်ပညာရေးနောက်ခံမလိုအပ်ပါ။
# အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု
# အလယ် / သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်
●တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်ပြန်လာဖြစ်နိုင်ပါတယ်
# လစာတိုး / အပိုဆုကြေး / အမျိုးမျိုးသောစရိတ်များရှိပါသည်
တနင်္ဂနွေနေ့များ၊ GW၊ နွေရာသီ၊ နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များတွင်အခြား site အစီအစဉ်များကို အခြေခံ၍
ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဤစာမျက်နှာရှိ <Form application> မှလျှောက်ထားပါ။
3-7-20 Koganekiyoshigaoka, Matsudo-shi, Chiba * Matsudo စတိုး၏အချက်အလက်မြေပုံကိုကြည့်ပါ။
Nagumo Housing Co. , Ltd. ပင်မစာမျက်နှာ
Matsudo၊ Kashiwa နှင့် Nagareyama တို့တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုသည်
Nagumo Housing Co. , Ltd.※"ငါ Genvers ကိုမြင်တော်မူ၏"မင်းပြောတာကချောချောမွေ့မွေ့* လျှောက်လွှာနှင့်အလုပ်ကိစ္စများ မှလွဲ၍ အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများမပြုလုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုလုပ်ပါ။